दशैमा घर जानेहरूका लागि कहिलेदेखि खुल्दैछ बसको अग्रिम टिकट बुकिङ ? यस्तो छ तयारी — Sanchar Kendra
दशैमा घर जानेहरूका लागि कहिलेदेखि खुल्दैछ बसको अग्रिम टिकट बुकिङ ? यस्तो छ तयारी
काठमाडाैं । यातायात व्यवस्था विभागले घटस्थापनाको एक साताअघि बसको अग्रिम टिकट खोल्ने तयारी गरेकाे छ। यसका लागि विभागले यातायात व्यवसायीसँग छलफल सुरु गरेको छ। अग्रिम टिकट खोल्न व्यवसायी सकारात्मक रहेको विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुषालले जानकारी दिए।
‘हामी आज यही विषयमा व्यवसायीसँग छलफलमा थियौं। आइतबार पनि बैठक छ त्यसपछि मात्रै मिति तय हुन्छ,’ उनले भने। विगतका दशैंझैँ यो वर्ष उपत्यका छोड्ने धेरै नहुने उनको तर्क छ। ‘अघिल्ला वर्ष दशैंमा करिब २० देखि २५ लाख यात्रु बाहिरिन्थे‌। यो वर्ष ४ देखि ६ लाख मात्रै बाहिरिन्छन् भन्ने हम्रो अनुमान छ। त्यसैले ठूलो समस्या पर्दैन,’ भुषालले भने।
यो वर्ष अग्रिम टिकट खुलाउँदा समस्या पर्नसक्ने नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासघंका कोषाध्यक्ष केदार उप्रेतीले बताए। ‘पहिलो कुरा यसपालि यात्रु नै छैनन्। अग्रिम टिकट पुर्णिमाको दिनसम्मको काटिन्छ। सरकारले फेरि लकडाउन गरिदियो भने यात्रुको लाखौं रकम काउन्टरसँग हुन्छ। यात्रुले त्यो पैसा फिर्ता लिन झनै झमेला हुन्छ,’ उनले भने।
हाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार गाडी चलाउन नसकिने उनले बताए। ‘हवाई जहाजलाई पुरै सिटमा यात्रु हाल्न दिने तर गाडीलाई किन नदिने। अहिलेको भाडामा यातायात व्यवसायीले इन्धन खर्च र स्टाफको तलव दिन पनि कठिन छ,’ उप्रेतीले भने।